“Galgala dagaal kama dhicin, Puntland-na ciidan kagama dhiman” afhayeen Libaax-joorre. – Radio Daljir
“Galgala dagaal kama dhicin, Puntland-na ciidan kagama dhiman” afhayeen Libaax-joorre.
Garowe, Feb 15 – Afhayeenka xukuumada Puntland Libaax-joorre ayaa beeniyey in dagaal ka dhacay aagga Galgala ee gobolka Bari.
Warar ay qoreen qaar saxaafada afka Somaliga ee koonfurta iyo waqooyiga Somaliya ayaa baahiyey warar sheegaya in dagaal ka dhacay aagga Galgala, ciidamo dhan 20-nna laga dilay Puntland.
Md. Libaax-joorre waxaa uu xusay in aanu dagaal ka dhicin Galgala, aananyna jirin ciidan laga dilay Puntland.
Afhayeenku waxaa uu sheegay in ciidanka Puntland ay todobaadkii hore qabteen nin la sheegay in uu la dhashay Maxamed Siciid Atam oo la sheegay in uu u qaabilsanaa qaraxyada, iyo miina-samaynta.
Afhayeenku waxaa uu sheegay in dagaaladii sannadkii hore ka dhacay buuraha Galgala in laga heshiiyey, xalna laga gaaray; waxaa uu intaas ku daray in aanay jirin ciidamo Al-shabaab ah oo ku sugan Galgala.
Waxaa la sheegaa in Maxamed Siciid Atam oo hoggaamiye u ahaa koox hore u dagaalamay Galgala uu weli ku sugan yahay meelo ka mid ah gobolka Bari walow warar kalena ay sheegaan in uu u talaabay waqooyiga gobolka Sanaag halka warar kale ay sheegayaan in uu ku sugan yahay koonfurta Somaliya.